Ogaanshaha waxyaabaha lagu beddeli karo: Hordhac | Laga soo bilaabo Linux
Ogaanshaha waxyaabaha kale: Hordhac
Maxay tahay isticmaalka nolosha oo dhan iyadoo la leeyahay qaybintayada waa wax weyn haddii aynaan run ahaantii tusin dadka isticmaala nidaamyada kale ee hawlgalka faa'iidooyinka GNU / Linux?
Taasi waa sababta aan u go'aansaday inaan bilaabo qoritaanka taxane maqaallo ah oo aan isku dayi doono inaan ku sharaxo sawirrada iyo qoraalka, sida codsiyada qaarkood ee aan maalin walba u isticmaalno OS-ga ay ka kooban yihiin oo u shaqeeyaan, oo markaa ku muujiyaan tusaalooyin wax ku ool ah mid kasta oo ka mid ah .
Waxaan isku dayi doonaa inaan noqdo sida ugu macquulsan ee faahfaahsan, iyo dabcan, si aanan u noqon qoraa tabloid ah, waa inaan sameeyaa baaritaan horudhac ah oo hordhac ah oo ku saabsan codsiyada la isbarbar dhigayo. Waa inaad cadaalad noqotaa Tan waxaan u isticmaali doonaa Debian leh KDE y Windows 7 Professional.
Xiran doono KDE 3 sababood oo fudud:
Waa jawiga desktop-ka ee aan isticmaalayo wayna ii fududaanaysaa inaan maqaalka fuliyo.
Waa bay'ada hadda umuuqata sida dadka isticmaala ay ula qabsadeen Windows 7.
Waa jawiga desktop-ka ugu dhameystiran, sida aan gadaal ka arki karno.
Hordhacdan ka dib, maqaalka soo socda ee aan ka fekerayo inaan soo saaro wax soo saar wuxuu yeelan doonaa cinwaankiisa: Ogaanshaha waxyaabaha kale: Dolphin vs Windows Explorer, iyo dabcan, waad qiyaasi kartaa wax badan ama ka yar waxa ay tahay.
Hadafkeygu maahan inaan abuuro muran, olol yar, laakiin si fudud inaan muujiyo waa maxay faa'iidooyinka dhabta ah ee barnaamijyadan aan maalin walba u isticmaalno iyo xitaa inay leeyihiin xulashooyin aan iska indhatirno adigoon ogeyn, marka loo eego kuwa sida caadiga ah ku yimaada Microsoft Windows.
Kama hadlayo OS X, maxaa yeelay macquul ahaan fursad uma lihi inaan ku baaro OS-gaan si fiican ugu filan si aan u siiyo fikrad daacad ah.
Waxaan sidoo kale ka boodi doonaa mowduucyada xiisaha u yeelan kara dadka cusub, maadaama aan ka heli karno maqaallo badan oo noocaan ah boggeena. Waa kuwan qaar aan xiiso u qabo in la tixgeliyo:
Maxay tahay inuu adeegsade Windows ka ogaado GNU / Linux?
Qaab dhismeedka faylka ee GNU / Linux
Linux loogu talagalay Dummies III. Degaanada Desktop.
Talooyin ku saabsan doorashada qaybinta GNU / Linux
Waa hagaag taasi waa .. Waxaan rajeynayaa inaan diyaariyo maqaalka koowaad ee silsiladan sida ugu dhaqsaha badan ... 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ogaanshaha waxyaabaha kale: Hordhac
Wanaagsan, waxaan rajeynayaa maqaalada 😀
Waxaan u maleynayaa inay tahay fikrad aad u fiican, sidoo kale waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido badan marka ay timaado muujinta waxyaabo kale oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Windows-ka ee hadda jira waxayna u oggolaan doontaa in la hagaajiyo kala-guurka Windows 7 ee nidaamka leh Kde (xitaa sidaas oo ay tahay, waxay sidoo kale noqon laheyd waxa uu adeegsado Windows 8, in ka badan wax kasta inaad adigu isbarbar dhigto oo aad fahanto haddii qalooca barashada W7 ilaa W8 ama Debian oo leh KDE ay u qalanto).
Si aad u wanaagsan ayaa loo yidhi tan
»Maxay tahay faa iidada loo maro nolosha oo la dhaho qaybintayada waa wax weyn hadii aanaan runti tusin isticmaalayaasha Nidaamyada kale ee Operating-ga faa'iidooyinka GNU / Linux «
Waad salaaman tahay, fikirka waan jeclaaday, waxaan ahay isticmaale Windows ah wayna igu adkaatay inaan ogaado Linux, waxbadan ayaan isku dayay 5 jeer, inkasta oo hada la i baray, aniga aniga waxaa jira shuruudo aan la aqoon oo aad la qabsanayso si fudud oo loo maleeyo in kuwa kale ay ogyihiin in qof aniga oo kale ah aysan macquul aheyn. Codsiyadana, waan kugu hambalyeynayaa waxaanan kugu dhiirigelinayaa inaad mar walba ku sameyso qaab isbarbardhig ah maxaa yeelay habkaas ayey ugu fududaan doontaa kuweena cusub inay si wanaagsan u ogaadaan nidaamkan hawlgalka.
Haddii aad wax shaki ah ama su'aalo ah qabtid, ha ka xumaanin oo samee, waa runtaa in marar badan aan u qaadanno waxyaabo ama fikradaha mid la iska indhatiro, oo qaar ka mid ah dadka adeegsada noloshu aad u lumeen. Xitaa markaan marwalba isku dayno inaan sharaxno wax walbo, marwalba waxbaa naga dhiman 🙁
Marka waxaan ku celinayaa, wixii su'aalo ah ee aad qabtid, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno 😉
Weydiiso cabsi la'aan in adduunka Linux aan dhammaanteen waji doqon ah ka qabannay waxyaabo badan, in haddii aad taqaanno Ingiriis yar xitaa haddii uu jiro turjubaanka google - waana 'ku dhowaad wax walba oo Isbaanish ah - raadinta Google ama ubuntu.com - taas oo aan arko inaad ku adeegsaneyso Chromium waxaad ka heli doontaa dukumiinti aad u tiro badan.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho Chrome sidoo kale waad isticmaali kartaa, waa inaad soo dejiso deynta, oo aad laba jeer gujiso, USC ayaa furi doonta oo kaliya waadna aqbali doontaa kiiskan oo la mid ah rakibidda MS WOS exe marka loo eego xirmada USC ama konsol.
Laakiin waxaad isticmaashaa ubuntu taasi waa talaabada koowaad ee waxbadan oo aan helnay waana ixtiraamayaa barashada Gnu / Linux waxaan filayaa inaad sameyn doontid maalin kasta.
Haddii aad ka hadli doontid oo keliya wax ku saabsan KDE, maxaad u isticmaali weyday Chakra, taas oo aniga ii ah KDE heer sare ah.
Sababtoo ah isbarbardhig, xitaa isku dar, Nautilus - Gnome iyo Unity - iyo Thunar - XFCE -, marka lagu daro kuwa kale waa inay galaan isku darka - Nautilus wuxuu taageeraa fidinta taas oo aad loo soo dhaweynayo -
Iyo adoo xoojinaya in Linux aan isku dari karno oo u isticmaali karno KDE iyo Nautilus ama Thunar, xitaa maareeyaha faylka Wine isku mar.
Xaqiiqdii aniga oo si joogto ah u isticmaala XFCE iyo Thunar, mararka qaarkood waxaan bilaaba sudo nautilus si aan u sameeyo waxyaabo gaar ah - sida beddelka milkiilaha faylasha si isdaba joog ah -
Isla sidaas ayaa la weydiisanayaa shaqo aad u badan, laakiin ma ahan wax aad u badan haddii aad diirada saarto astaamaha dheeraadka ah ee mid kasta iyo habka kala duwan ee uu u shaqeeyo - oo aan aad ugu kala duwaneyn kuwa Linux -, xitaa aqrinta maqaal hore
Sidoo kale waxaan kula talin lahaa XFCE ka hor, iyadoo gudiga hoos loo dhigo qof ka yimid MS WOS oo ka badan KDE si loo yaqaan, in kasta oo fikradaha badhida ah, midkeenba aan leenahay - kuweena -.
Marka la soo koobo, waa ka Linux in ka badan a KDE inkasta oo aad ku hadli karto aqoon badan oo KDE ah, dabcan waad qortaa oo aad sameysaa wax kasta oo aad jeceshahay, waa uun soo jeedin sidaa darteed raaxada aqrintaada - inaan yeelan doono waa - waa ka weyn yahay maalintiisa.
Waxaan isku dayi doonaa inaan ka hadlo wax kasta oo beddelaad ah iyo dhiggooda, ugu yaraan GNU / Linux, laakiin maskaxda ku hay in haddii aynaan ka hadlin qaybinta kale iyo Degaanka Desktop, waa sababta oo ah aad ayey noogu adag tahay inaan helno:
1- Sababtoo ah qadka internetka aad ayuu u xun yahay.
2- Sababtoo ah kumbiyuutarrada aan adeegsado midkoodna ma ahan shaqsiyan, dhammaantood waxay ka yimaadeen shaqo.
Sikastaba, waan aqbalay soo jeedintaada anigoo raali ah .. 🙂
Marka laga hadlayo dadka cusub, waxaa jira qaybinta oo leh wax ka dhigaya "nolol maalmeedka" mid u fudud kuwa hadda bilaabaya: "xarunta softiweerka", xaaladdan waxaan dooran lahaa Kubuntu, ma ahan sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay tahay ka fiican ka durugsan Chakra (waan isticmaalaa waana jeclahay) laakiin maxaa yeelay bartaas muhiimka ah (rakibidda softiweerka) waa tan ugu fudud ee la heli karo. Waxaan bogaadinayaa hindisaha qormooyinkan. Farxad
Talo soo jeedin markaad u socoto barnaamijyada maqalka / fiidiyowga waxaad dooran kartaa Ubuntu Studio oo ah XFCE, laakiin haddii aad ku sii sugnaato Debian iyo KDE waa inaad rakibtaa kernel latency-ka hooseeya - wuxuu u jiraa dhammaan distros - waana kan waxay ku imaaneysaa Markii hore Ubuntu Studio, inkasta oo wax kasta oo distro ah aad wada yeelan karto labadaba - midka caadiga ah iyo midka daahitaanku hooseeyo - sidaa darteed natiijooyinka maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga ka dib ayaa "timaha baalasha" u siinaya MS WOS iyo OSX.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa wax fiican inaad u xilsaarto mudnaano gaar ah hawlahan, laakiin markaan si fiican u adeegsado ma aanan helin cashar wanaagsan
: Ama xiiso leh. Taas kamaan ogayn ..
Waxa aad leedahay waa wax aad u xiiso badan. Waxaan jeclaan lahaa inaan barto sida loo saxo fiidiyowyada oo aan si sax ah ugu rakibo barnaamijka KDEnlive ee Xubuntu. Marnaba ma awoodin inaan si guul leh u sameeyo. Waxyaabaha qarsoon ee hooseeya ee maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga… maqaal ama qoraallo taxane ah oo ku saabsan arrinta ayaa mudan.
xiiso leh Dolphin vs Windows Explorer, aniga dolphin ma haysto wax la tartamaya marka la barbardhigo maareeye kasta oo keena OS ama desktop 😀 Marka laga hadlayo adeegsadayaasha cusub, waxaan haajiray ku dhowaad sanad iyo badh celcelis ahaanna isticmaaleha Linux waa 50% nidaamka maamulka iyo 50% isticmaaleyaal. Celcelis ahaan adeegsade guuleyste waa 98% isticmaale iyo 2% maamule waana inuu rakibaa barnaamij wax walba uga tagaya hal guji. Way adag tahay in laga beddelo adeegsade barnaamijyada kale, haddii uusan jeclayn inuu la shaashado OS-ga oo uu barto.
Fikraddu wey fiican tahay, laakiin hal su’aal ayaa harsan in la xaliyo.
—Sidee loo helaa isticmaalayaasha Windows-
Haddii aad hayso wax fikrad ah, waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo.
Waxaa laga yaabaa inay muujiso adeegsadayaashaas inay iyagu aad u yihiin, waxyaabo gaar ah mooyee, ay ku sameyn karaan Linux sida Windows-ka oo kale oo xitaa ay si ka fiican u sameeyaan.
Waan la wadaagayaa waxaad leedahay, laakiin aniga aragtidayda dhibaatada ugu weyni kuma jirto adeegsi iyo nabadgelyo midna, laakiin waa mid raaxo leh, oo caado ...
Taasi waa dhibaatada, xalkuna ma sahlana. Waxaan u maleynayaa in olole suuqgeyn wanaagsan uu ku caawin karo.
Sidee loo cadeeyaa? ... taasi waa dhibaatada.
Talo: Si dhakhso leh dib ugu rakib